About Us - Fet Dhismaha Qalabka & Technology Co., Ltd.
Cement Fiber Wall Board
Guddiga Cement Fiber Tifaftirayaasha
Guddiga Cement midab Fiber
Guddiga Cement Wood Midho Fiber
Guddiga Cement Fiber Asbestos Non
Guddiga Cement Fiber Gudaha
Guddiga Cement dibadda Fiber
Guddiga Floor Cement Fiber
Cement Fiber Guddiyada dibadda
Cement Fiber Guddiyada noqdeen
Hel Board Cement Cement Fiber Board Wall & Tifaftirayaasha Fiber Now!
Riix halkan Si aad u codsato xigasho
SUUQA WEYN FAAHFAAHINTA KALE NOOCA GANACSIGA
Waqooyiga Ameerika Brands: FET GUDDIGA Manufacturer
South America Tirada Shaqaalaha: 200 ~ 300
Western Europe Sales Annual: 15-20million
Yurubta Bari Year la aasaasay: 2003
Bari Asia Dhoofinta pc: 50% - 60%
Ningbo Fet Dhismaha Qalabka & Technology Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003 in Ningbo City, oo ku yaalla koonfurta ee Shanghai, 50km ka dekedda Ningbo.
Waxaan nahay soo saaridda ugu weyn xirfadeed ee guddiga fiber cement, guddiga silciate calcium ee Shiinaha by 4 warshad lines.Our saarka automic daboolayaa meel ka mid ah 600,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo leh awood sanadlaha ah ee 20,000.000 mitir oo laba jibbaaran.
Waxaan leenahay a content farsamada sare iyo aqoonsado alaabta novelty.The sayniska iyo farsamada ee gobolka waa la tijaabiyey by Intertek, SGS, TUV, PSV, our ganacsi lagu ansixiyay ISO 9001: 2008 iyo ISO14001: 2001, waxaa lagu qeybinayay macaamiisha ee USA , Bariga Dhexe, Australia, Africa, Europe, South Asia iyo wixii la mid ah.
Tiro aan dhoofin qaataan 60% ka mid ah wax soo saarka oo dhan.
Daacadnimo soo dhaweyn saaxiibo dheeraad ah in ay iskaashi nala!
Ningbo Fet Dhismaha Qalabka & Technology Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003. Iyada oo fikirka ah "taasoo keentay tayo leh, hal-abuurnimo wadista", Shirkadda quduus bixiya waxyaabaha taxane dhaqanka macaamiisha caalami ah oo ka dhergin baahida. Oo ku abuuray xaaladda guul-guul ganacsi macaamiisha iyo gaari horumarinta waara.
In tobankii sano ee la soo dhaafay, FET focus on horumarinta iyo wax soo saarka si ay wax soo saarka, kaas oo ku siin kara user farxad iyo fun.With tayo leh ka xoogbadan, iyo hal-abuur u gaar ah, had iyo jeer FET haysaa keentay meel duurka ku xirfadeed.
FET sidoo kale bixisaa fiiro gaar ah u masuuliyadda bulshada shirkadaha halka dhakhso u kordhaya, had iyo jeer waxaannu xusuusan nahay fikirka ah ilaalinta deegaanka lagu jiro wax isticmaalka iyo habka wax soo saarka alaabta.
Waxaan ka shaqeeya wax soo saarka si adag iyadoo la raacayo ISO9001 iyo ISO14001, hirgelinta TQC si ay u fasiraan fikradda brand gaarka ah ee howlgalka ka mid ah geedi socodka gaar ah, hufan, bay'adda u fiican oo heer sare-caadiga buuxa.
Ka dib markii muddo dheer shaqo adag oo joogto ah, FET waxay samaysay shebekad suuq xoog leh ee dunida oo dhan, wax soo saarka ayaa daboolay kasta magaalooyinka gobolka iyo magaalooyinkeedii. In suuqyada caalamka, macaamiisha shirkadda ee pervade in Southeast Asia, Europe, America iyo Bariga Dhexe iyo dalalka kale iyo gobollada.
Waxaan u hoggaansamaan suuqa-dhisan, kor reengineering habka macluumaad dheeraad ah, la dhiso nidaamka macluumaadka ku salaysan oo qaadashada macaamiisha sida xarunta, iyo in la dhiso shabakad caalami ah oo logistics, dhaqdhaqaaqa kaashka, iyo isa-siinta xogta. Waxaan haystaa ruuxa shirkadu "In la abuuro qiimaha, iyo in ay guul wax dhis", wuxuu Abuuraa brand dunida u gaar ah ummadda Chinese iyo waa diyaar u ah inay si degdeg ah u koraan sida mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu fiican caalamka.
Ningbo Fet Dhismaha Qalabka & Technology Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003. Iyada oo fikirka ah "tayada keentay, hal-abuurnimo wadista", Shirkadda quduus bixiya macaamiisha caalamiga ah waxyaabaha taxane dhaqanka oo ka dhergin baahida, iyo qaabeeya shakhsiyadda brand kala, abuuray ganacsi xaaladda guul-guul la macaamiisha iyo gaari horumarinta waara. In tobankii sano ee la soo dhaafay, FET focus on horumarinta iyo wax soo saarka si ay wax soo saarka, kaas oo ku siin kara user farxad iyo xiiso leh. Laga soo bilaabo hal wax soo saarka si ay line wax soo saarka badan development.With tayo leh ka xoogbadan, iyo hal-abuur u gaar ah, Waxaan mar walba ku adkaysatay jagada hoggaamineed oo duurka ku xirfadeed.
Waxaan heysanaa koox naqshadeeye gaar ah fasalka-koowaad oo aragti caalami ah, oo uu sameeyay qaab shakhsiyadda iyo design oo kala duwan oo xaqiijisay jiirtii socotaa ka design wax soo saarka, horumarinta caaryada, warshadaha wax soo saarka si ay nidaamka qiime brand.
Waxaan leenahay 4 khadadka-soo-saarka leh heer sare qalabaynta iyo xubno badan oo shaqaale xirfad leh. Waxaan inta badan ku takhasusay soo saarta kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha sida dabka, madaxtooyada, UV dahaarka leh, guddiga cement fiber iftiinka iyo mat.We qubeyska diatomite kasbadeen sumcad wanaagsan ee suuqyada gudaha iyo dibedda.
Waxaan dhigto Frankfurt Paperworld Fair la image brand wanaagsan, oo soo dhaweeyay macaamiisha ka adduunka oo dhan la soo saarka oo tayo sare leh.
Waxaan dhigto cadaalad Kantoonka, FET GUDDIGA salaamaya macaamiisha caalami ah la soo saarka qalabka xafiisyada tayo sare leh, iyo sidoo kale muujinaya purchasers caalami ah image brand wanaagsan.
ADDRESS: 189 # Longzhen Road, Cixi City, Ningbo, Gobolka Zhejiang, Shiinaha
Guddiga Cement dibadda Wall Wood Midho Fiber , Guddiga Cement Fiber Waayo dibadda Wall , Guddiga Cement dibadda Wall Fiber , Guddiga Cement Fiber Midabada dibadda Wall ,